1. Ukugoqwa kwesipho seCylindrical kungenye idizayini epholile engasebenza emikhosini noma ezinsukwini ezikhethekile, ngoba empeleni izinhlobo eziningi zokupakisha zenzelwe ukwakheka okuyindilinga njengamabhokisi amakhukhi, amabhokisi kashokoledi, njll. Abantu abaningi bangacabanga ukuthi indlela yokugoqa isipho eyisilinda inzima, kepha empeleni akunjalo.
2. Izimpahla zokulungisa - Iphepha lokusonga isipho - Isikele - Iteyipu yokufihla esobala - Ukunamathisela emaceleni amabili amancanyana - Iribhoni lesipho
3. Spread iphepha lokugoqa bese ubeka isipho sesilinda. Qhathanisa ukuphakama komphetho ophezulu wephepha ukuze ulingane ngaphakathi kwebhokisi.
4. Sika iphepha ngosayizi webhokisi owabeke ekuqaleni. Ngokusika imiphetho ngobude bephepha
5. Uma unesipho esinde esingunxande esigoqiwe, beka ibhokisi lesipho eliyindilinga lime mpo phakathi kwephepha lokusonga. Uhlangothi olulodwa olubhekene nonqenqema lwephepha ukulungiselela ukugoqwa komqulu.
6. Qala ukugoqa nge-tape esobala phakathi kohlangothi lwephepha nebhokisi lesipho.
7. Bese ugoqa olunye uhlangothi lwephepha ukuze uvale ibhokisi lesipho ume mpo. Vikela i-tape ngokuqinile ukuze ingaqhamuki.
8. Songa iphepha elingezansi phansi kuqala ukuze ubambe kahle phezulu kwebhokisi. Okungenzima ukujola ngakho
9. Bamba ikona lephepha elishayisana nohlangothi olulodwa, lisonge phansi phezulu ebhokisini bese unamathisela itheyiphu ebonakalayo.
10. Qala ukubamba amakhona ngokucindezela umqulu wephepha ohlangothini olufanayo bese ucindezela kuze kube yilapho i-crease isayizi efanayo. Uma ugoqiwe izikhathi ezingama-3-4, sebenzisa iteyipu yokunamathela ecacile ukuvimbela ukukhululeka. Qhubeka wenze lokhu kuze kube ibhokisi lonke.
11. Uma usuqedile ngenhla, flip ibhokisi ukuze wenze phansi okufanayo ngqo. Songa ama-pleats kahle.
12. Sika amasentimitha ambalwa wokunamathisela emaceleni amabili kuye ngosayizi webhebhoni. Inamathele ngemuva kweBo Bese uletha uBo bese ubeka phezulu kwebhokisi phakathi noma enye ingxenye oyithandayo. Yilokho kuphela.
13. Ungasonga kanjani isipho se-cylinder akunzima nakancane. Kusondele ngisho nenkathi yomkhosi, uma ufuna ukunikeza isipho sokuveza uthando Ukunakekela abaseduze kwakho Ngemuva kwalokho kufanele usonge isipho esinjengalesi Bese uzama ukuyisebenzisa ndawonye